Uncategorized – Thadin Media
ဒီတခါတေါ့ ရခိုင်နယ်စပ်မှာ မြန်မာတပ်တွေအင်အါးလျော့ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပီး အနည်းအကျဉ်း သုံးသပ်တင်ပြချင်ပါတယ် မြန်မာ့တပ်မတော်က နယ်စပ်မှာ တပ်တွေဖြန့်ကျက်ချထါးတေါ့ ဘ ကုန်းက ကုန်းအော်တယ်ပေါ့။ ဒီလိုမြန်မာတပ်တွေ ဖြန့်ကျက်ချထါးတါ နှစ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပီး ဒါကို အမျိူးဖျက်လေါက်ကောင်တွေ က မြန်မာ ကကြောက်ပီးပြန်ဆုတ်လါတယ် ဆိုပီး ဝိုင်းအော်ကြသေးတယ်။ စဉ်းစားညာဏ်မရှိတဲ့ စစ်ရေးအမြင်မရှိတဲ့ နလပိန်းတုံး တွေကပေါ့ မြန်မာ့တပ်မတော်က နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးဖြန့်ကျက်ချထါးတါ ကိုယ့်တ်ုင်းရင်းသား ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ပါ။ တကယ်တေါ့မြန်မာ့တပ်မတော်က R2P uk us မဝင်မှာကို ကြိုသိပီးသား ရခိုင်နယ်စပ်မှာ အဓိက ဝင်လါမှာက arsa…
နိုငျငံကစဈဖွဈနိုငျသညျ့ အနအေထားအမွငျ့ဆုံးအခွအေနေ ရောကျနတေယျ လူငယျလူလတျတှကေ စိတျမဝငျစားကွဘူး သတငျးနားမစှငျ့ကွဘူး ဖာသိဖာသာမဆိုငျသလိုနကွေတယျ ဘောလုံးပှဲလောငျးလို့ကောငျးတုံး နှဈလုံးသုံးလုံးထိုးလို့ကောငျးတုံး ဆေးပွားခလြို့ကောငျးတုံး ဘိနျးရူလို့ကောငျးတုံး ရခေဲခလြို့ကောငျးတုံး ဘီယာသောကျပွီးဇိမျခတျကောငျးတုံး ဂိမျးဆော့လို့ကောငျးတုံး ဖုံးပှတျလို့ကောငျးတုံး ဘုနျးကွီးတှကေိုစျောကားလို့ကောငျးတုံး ပါတီတှခေငျြးပုတျခတျလို့ကောငျးတုံး တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြးရနျဖွဈလို့ ကောငျးတုံး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့က UNနဲ့ပေါငျးEUနဲ့ပေါငျး OICအထောကျအပံ့တှယေူပွီး နညျးမြိုးစုံနဲ့နယျမွသေိမျးဘို့ ကွိုးစားနတေယျ အမှနျတရားကိုမကျြကှယျပွုပွီး အမြားနဲ့အနိုငျကငျြ့ဘို့လုပျနကွေပွီ ခွိမျးခွောကျမူအမြိုးမြိုးနဲ့လညျး သှေးတိုးစမျးနကွေပွီ စက်ကနျ့ပိုငျးမိနဈပိုငျးနာရီပိုငျးအတှငျးမှာ စဈပှဲစတငျနိုငျတယျဆိုတာ ပွညျသူအမြားမသိဘူးဖွဈနတေယျ အခြိနျမရှေးသငျ၏ခေါငျးပျေါမှာ အမွှောကျဆံတှေ၊ဒုံးပြံတှေ၊ဗုံးတှေ ကညျြဆံတှပေလူပြံကရြောကျနိုငျတယျ ဆိုတာလညျးမစဉျးစားမိဘူးနဲ့တူတယျ သငျအသခေံမလား ? ပွနျခဘြို့လုပျမလား ? Boe…
February 20, 2018 aUncategorized
[Zawgyi] ရုရှားနိုင်ငံသည် ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆.၆ သန်းခန့် ကျယ်ဝန်းပြီးဥရောပတိုက်နှင့်အာရှတိုက်ရှိဒေသအများ အပြားသည် ရုရှားနိုင်ငံထဲတွင်ပါဝင်သည် ။ ပထ၀ီတည်နေရာ အနေအထားအရအာရှ တိုက်မြောက်ဘက်၊ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် ထိစပ်နေပြီး ဥပရောနှင့် မြောက်ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာတို့ကြားတွင် တည်ရှိနေသည်။ Ural တောင်တန်းကြီးက ရှရှားအား အာရှနဲ့ဥရောပဟု၍ ပိုင်းခြားထား လေသည်။ ရှရှားအား ၁၉-ရာစုအချိန်က ကကြည့်မည်ဆိုပါလျှင် ဥရောပနှင့်အာရှတွင်လည်း နယ်ပယ်များရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၄- ခုနှစ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရုရှား-ဂျပန် စစ်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ပြီး နောက် ၁၉၀၅ တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပါလီမန် ဖွဲ့စည်းပုံ…
သတင်းထောက်တဦးကို လူမှောင်ခိုမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထား
December 29, 2017 aUncategorized
[Unicode] အစိုးရပိုငျကွေးမုံသတငျးစာက သတငျးထောကျမှတျပုံတငျကဒျပွားကိုငျဆောငျထားသူတဦးကို ရခိုငျပွညျနယျက မှတျဆလငျတှေ ပွညျမွို့ဖကျခိုးသှငျးရနျကွိုးစားမှုအတှကျ မနကေ့ ဖမျးဆီးလိုကျပါတယျ။ ကြောကျဖွူမွို့မှာနထေိုငျတဲ့ အဲဒီ သတငျးထောကျ စောမိုးကြျောဆိုသူဟာ ကြောကျတလုံးဒုက်ခသညျစခနျးက မှတျဆလငျ ၆ ဦးကို တိုယိုတာ မတျတူးဆီဒငျကားနဲ့ ပွညျမွို့ဖကျချေါယူလာခဲ့ကွောငျး နဲ့ ပနျးတောငျးမွို့နယျ ညောငျကြိုး စဈဆေးရေးဂိတျအရောကျ မနနေ့လေ့ညျက တားဆီးခဲ့ရာမှာ ကားမောငျး ထှကျပွေးသှားတဲ့အတှကျ လုံခွုံရေးအဖှဲ့တှကေ လိုကျလံ ဖမျးဆီးမိခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ ကွေးမုံသတငျးစာရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာတော့ ဒီအမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ တစုံတရာပွောကွားခွငျးမရှိပဲ ဦးစောမိုးကြျောကို ၂ဝ၁၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလကစပွီး…
လေယာဉ်ပေါ်မှာ ခရီးသည်တွေနဲ့ ပျော်ပါးပြီး ၂ နှစ်အတွင်း ယူရို ၆ သိန်းခွဲရှာခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မယ်
December 24, 2017 aUncategorized
[Zawgyi] အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်းလိုင်းဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ခရီးစဉ်ကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ လေယာဉ်ပျံသန်းချိန်မှာ စပြီး ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုကို ပြုပါတယ်။ ဒီလို လှုပ်ရှားဖို့အတွက် ခရီးစဉ်ရှည်တဲ့အပိုင်းကို ရွေးချယ်ပြီး လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေကြောင်းခရီးစဉ်တခုပျံသန်းတိုင်း သူမဟာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ယူရို ပေါင် 1500 နဲ့ ခရီးသည်တွေကို ပျော်ပါးခဲ့တာဖြဟ်ပါ။ သူမဟာ အဲ့အတွက် လေယာဉ်မှုးကိုတော့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး ညှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ လေကြောင်းလိုင်းကို သိက္ခာကျစေသလို အခြားလေယာဉ်မယ်တွေအပေါ်မှာပါ ဆိုးကျိုးရှိလို့ သူမကို လေယာဉ်မယ်လောက ကနေ…
ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံမှ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်များရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် မဆုံး ရှုံးသင့် ပဲအသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ
December 23, 2017 aUncategorized
[Zawgyi] ဒီလောက်သွေးအန်နေတဲ့ကလေးကို ကုတင်ပေါ်မှာ၂နာရီကျော်ပစ်ထားပြီးတော့ဒီမှာကလေးကသွေးအန်နေတယ်လို့သွားပြော တော့ဆရာဝန်မကပြန်ပြောပါတယ် နားမလည်ဘူးလားတဲ့ဒီမှာထမင်းစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါသွေးထက်အန်တော့မှထလာပါတယ်အရေးပေါ်ပို့မယ်ဆိုပြီးအပေါ်ထက်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက် ကျသွားပါပြီ၂နာရီအတွင်းမှာသူတို့သာဂရုစိုက် ပြီးကုသပေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော့ရဲ့ညီမ လေးကဒီလိုဆုံးရှုံးချင်မှဆုံးရှုံးရမှာပါသူတို့ရဲ့ပေါ့ဆမှုကြောင့်သွေးလွန်တုတ်ကွေးဆိုတာကိုမပြောပဲအဆုတ်သွေးကြောပေါက်တာတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကိုပို့တော့တုတ်ကွေးဆိုပြီးပို့ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆရာဝန်တွေဆေးရုံမှာရှိနေရင်အသက်တွေမဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးရှိသောမိခင်များရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကိုသွားမပြမိပါစေနဲ့လို့အားလုံးကိုသတိပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးဆုံးရှုံးသလိုအဲ့ဆရာဝန်ရဲ့သားသမီးများလဲမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် [Unicode] ဒီလောကျသှေးအနျနတေဲ့ကလေးကို ကုတငျပျေါမှာ၂နာရီကြျောပဈထားပွီးတော့ဒီမှာကလေးကသှေးအနျနတေယျလို့သှားပွော တော့ဆရာဝနျမကပွနျပွောပါတယျ နားမလညျဘူးလားတဲ့ဒီမှာထမငျးစားနတေယျလို့ပွောပါတယျနောကျတဈခါသှေးထကျအနျတော့မှထလာပါတယျအရေးပျေါပို့မယျဆိုပွီးအပျေါထကျကိုပို့လိုကျပါတယျဒါပမေဲ့နောကျ ကသြှားပါပွီ၂နာရီအတှငျးမှာသူတို့သာဂရုစိုကျ ပွီးကုသပေးလိုကျမယျဆိုကြှနျတော့ရဲ့ညီမ လေးကဒီလိုဆုံးရှုံးခငျြမှဆုံးရှုံးရမှာပါသူတို့ရဲ့ပေါ့ဆမှုကွောငျ့သှေးလှနျတုတျကှေးဆိုတာကိုမပွောပဲအဆုတျသှေးကွောပေါကျတာတဲ့ကနျြးမာရေးဌာနကိုပို့တော့တုတျကှေးဆိုပွီးပို့ထားပါတယျဒီလိုမြိုးဆရာဝနျတှဆေေးရုံမှာရှိနရေငျအသကျတှမေဆုံးရှုံးသငျ့ပဲဆုံးရှုံးရလိမျ့မယျအဲ့အတှကျကွောငျ့ကလေးရှိသောမိခငျမြားရနျကငျးကလေးဆေးရုံကိုသှားမပွမိပါစနေဲ့လို့အားလုံးကိုသတိပေးခငျြပါတယျကြှနျတျောညီမလေးဆုံးရှုံးသလိုအဲ့ဆရာဝနျရဲ့သားသမီးမြားလဲမဆုံးရှုံးပါစနေဲ့လို့ကြှနျတျောဆုတောငျးလိုကျပါတယျ
မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော်
December 22, 2017 aUncategorized
[Zawgyi] အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော် တို့ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ညောင်ရွှေမြို့ရှိ Aureum Palace ဟိုတယ်မှာ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ မင်္ဂလာဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေကို ကျင်းပမယ့်အချိန်၊နေရာ တွေ အတိအလင်း ဖော်ပြကြေညာခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့ မင်္ဂလာပွဲမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တာကတော့ မေပြည့်စုံအောင်၊ဖိုးလပြည့် နဲ့နေခြည် ဦးတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော် တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှ ပုံရိပ်တချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ [Unicode] အာဘှိုငျးနဲ့ မွတျရတနာကြျော တို့ဟာ ဒီဇငျဘာလ…
၆ ဘီးကားနှင့် ဆိုင်ကယ် မျက်နှာချင်း ဆိုင်ဝင်တိုက်၊ မိသားစု ၃ ဦး သေဆုံး
December 21, 2017 aUncategorized
[Zawgyi] စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘုတလင်မြို့နယ် ပဲပြစ်တောအနောက်ရွာရှိ မုံရွာ-ရေဦး ကားလမ်းပေါ် မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ၆ ဘီးကားနဲ့တိုက်မိတဲ့အတွက် ဆိုင်ကယ် ပေါ် ပါလာတဲ့ မိသားစု သုံးဦး နေရာမှာ သေဆုံး သွားပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မုံရွာ-ရေဦးလမ်းပေါ် တောင်ဘက်ကနေ မြောက်ဘက် မောင်းနှင် လာတဲ့ ၆ ဘီးယာဉ် ဟီးနိုးကား နဲ့ မြောက်ဘက်ကနေ တောင်ဘက်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ ဆိုင်ကယ် တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဝင်တိုက်မိကြတာပါ။ သေဆုံး သွားသူတွေဟာ…
December 17, 2017 aUncategorized
[Unicode] မွိတျမွို့နယျ သဈယာဝကြောငျးထိုငျဆရာတျော ပြံလှနျတျောမူတာဟာ သှေးရိုးသားရိုး ဖွဈစဉျ မဟုတျဘဲ သံသယဖွဈပှားဖှယျ တှရှေိ့တဲ့အတှကျ ရုပျအလောငျးကို ပွနျလညျဖျောယူ စဈဆေးနတေယျလို့ မွို့မရဲစခနျးမှူးက ပွောပါတယျ။ နိုဝငျဘာ ၁၃ ရကျက ပြံလှနျတျောမူခဲ့တဲ့ သဈယာဝကြောငျးထိုငျဆရာတျောရဲ့ ဖွဈစဉျကို ဒကာ/ဒကာမတှကေ သံသယဖွဈနတေဲ့အတှကျ မွိတျမွို့မရဲစခနျးသို့လာရောကျပွီး ဒီဇငျဘာ ၃ ရကျနကေ့ အမှုဖှငျ့တိုငျကွားခဲ့တာကွောငျ့ ဒီဇငျဘာ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ မွို့နယျရဲမှူး ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့က သဈယာဝကြေးရှာမှာဂူသှငျးထားတဲ့ ဆရာတျောရုပျအလောငျးကို ပွနျလညျ ဖျောယူစဈဆေးနပေါ မွို့မရဲစခနျးမှူး ဒုရဲမှူးခြိုလှငျက “ဒကာ၊ ဒကာမတှကေ…